Home » သတင်း » NDTV မြက်ချိုင့်ထဲကနေပိုကောင်းတဲ့သတင်းထုတ်လုပ်မှု suite ကိုနှင့်အတူမည်သည့် device ကိုပေါ်, အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးပုံပြင်များရရှိသွားတဲ့
NDTV မြက်ချိုင့်ထဲကနေပိုကောင်းတဲ့သတင်းထုတ်လုပ်မှု suite ကိုနှင့်အတူမည်သည့် device ကိုပေါ်, အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးပုံပြင်များရရှိသွားတဲ့
MONTREAL – 8:00 IST, May 15 2019 - New Delhi Television Ltd. (NDTV), the leading Indian news broadcaster, has selected မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden Brand, to optimize its news production workflow for multiplatform content delivery – including mobile. Grass Valley was chosen for its ability to deliver innovative, flexible and future-proof solutions that allow the NDTV team to turn around news stories quickly and get them to viewers anytime, anywhere, on any device. This investment is part ofawider upgrade project and an extension of the innovation-driven collaboration between the two companies.
NDTV has been providing dedicated programming through its three national channels (NDTV 24×7, NDTV India, and NDTV Profit), websites and apps to more than 1 billion viewers across India, Southeast Asia and the Middle East. With Grass Valley’s GV STRATUS suite of production tools, iTX integrated playout platform နှင့် GV Korona K-Frame က V-စီးရီး production switcher, NDTV can evolve flexibly and with agility as consumer demand changes, while consistently delivering strong and compelling stories to its viewers – whenever and wherever they are.
The Grass Valley solutions seamlessly integrate with NDTV’s existing လွန်စွာလိုလားသော iNews system, as well as with its social media delivery platform.
လွန်စွာလိုလားသော ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor မြက်ချိုင့် မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden အမှတ်တံဆိပ် GV Stratus ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NDTV SJGolden - လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-05-15
ယခင်: HPA ဆုပေးပွဲကို Creative အုပ်စုများအတွက် Entries များအတွက်ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်ပါ
နောက်တစ်ခု: ဝိပဿနာတီဗီကို My-HD ကိုပလက်ဖောင်းပေါ် Launch ဖြင့် MENA ဖြန့်ဖြူးခိုင်မာစေ